Indlu Encinci ye-Bayside Glamping - I-Airbnb
Indlu Encinci ye-Bayside Glamping
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguTiffany
Indlu yethu encinci esandul 'ukwakhiwa icinyiwe ngokupheleleyo, isebenza kuphela ngamanzi elanga nemvula, kunye nendlu yangasese enomgquba. Indlu Encinci ikwimizuzu eyi-2 kuphela ngaphandle kwedolophu, ibekwe kwindawo enengca yemvelo, ibe ibonakala kakuhle kuzo zonke iifestile.
Indlu yethu encinci iquka izinto ezintsha ezisetyenzisiweyo ukuze kubekho iholide eqaqambileyo nezolileyo, kwindawo efihlakeleyo. Inqugwala lethu lefama kunye nomgangatho omkhulu wongeza kwizinto ezimangalisayo, kwaye ibhedi yethu eseluphahleni ikwenza uzive ngathi uhlala kwindlu yakho!
* * umntu ophumelele IGOLIDE kuluhlu lwe-2021 Yorke Peninsula Tourism Award 's Accommodation Accommodation, kunye nomntu OPHUMELELEYO kwiNkonzo Egqwesileyo * *
* * umntu ophumelele UBHEDU we-2021 South Australia Tourism Award 's Unique Accommodation
* * Utata wam omangalisayo Ndenze indawo ekhethekileyo ngokupheleleyo, ndenza uyilo olukhawulezileyo kwikhaya lethu losapho, nokwenza into ekhethekileyo kabawo ekusebenziseni izinto ezininzi kangangoko sinako.
Indlela ehonjiswe ngayo ngaphakathi ithathe i- 'farmyard chic', ebonisa indawo yasemaphandleni nezinto esizisebenzisileyo.
Ibhedi enomtsalane ifikelelwa kwileli, kwaye inomatrasi omkhulu otofotofo, kunye neendawo ezinkulu zendawo, apho uza kulala khona ngezinto zebhedi ezikumgangatho ophezulu kunye nezinto zokondlula umqhaphu.
Kukho iibhotile zamanzi ashushu zokukugcina ubutofotofo obuthe chatha ebusika, kunye nefeni exhonywe edongeni ejonge ebhedini ukuze uphole ehlotyeni, kunye nezikrini zokubhabha kuzo zonke iifestile.
Yindawo evulekileyo, kunye nendawo etofotofo yokonwabela i-cuppa yasekuseni, okanye ukubukela ukutshona kwelanga okumangalisayo kwi-arvo.
Senze enye indawo etofotofo kwigumbi lethu lokuphumla, apho unokuthi zava phakathi kweekhushini zebhedi ezitofotofo kule ndawo intle.
Usenokuba nethamsanqa lokubona enye yeentaba zasekuhlaleni okanye i-emo kwibhari yethu yesidlo sakusasa, ngoxa ubuka iindawo ezininzi ezijikelezileyo zengca.
Imihombiso emihle ebonakalayo kunye nezibane ezincinci zenza umahluko omhle kwindawo yethu eqaqambileyo nebukekayo.
I-loungeroom ikwayindawo yokufudumeza igesi, efudumeza indlu encinci ngemizuzu eyi-.
Siye sanikezela ngemidlalo yebhodi emininzi, nezinye izinto ezimbalwa ezingalindelekanga ukuze uhlale uxakekile!
lethu elihle elingaphakathi, uza kufumana ifriji yegesi, isitovu esinegesi esiyi-2, ithowusta yokukhempisha (phezu kwefleshi yegesi), iketile yesitovu, iipleyiti, iikomityi, iipleyiti, iimagi, iiglasi (inc. iwayini ne-champagne), izinto zokupheka kunye nezinto zokuhombisa.
Apha uza kufumana neentlobo eziyi-5 (ewe 5!) zeentlobo ezimnandi zeti yamagqabi aseSaha Botanica, eziye zadityaniswa e-Adelaide, yi-Hazel entle.
Uza kufumana nebhotile yasimahla esuka kwidiliya yaseYorke Peninsula ephumeleleyo; iBarley Stacks Wine.
Igumbi lokuhlambela: Igumbi
lethu lokuhlambela elingaphakathi likanokutsho lineshawa eshushu, indlu yangasese enomgquba.
Siye sazilahlela izinto ezimbalwa ezifuna ukulungiswa ukuze kubekho ubuntu obuthe chatha.
Sinamashiti okuhlamba ayi-2 x, iishawa zobuso eziyi-2 x, i-bathmat kunye neetawuli zezandla ezisuka kwi-Eco Downunder 's Organic Pamba.
Kwezi bhotile zintle ezivela kwiiNdawo Zokuhombisa Ezincinci, uza kufumana ishampu ne-conditioner yaseAdelaide esekelwe kwiNdalo yaseOstreliya, kunye nento yokuhlamba umzimba.
Inqugwala: Ukongezwa kweli nqugwala lale
fama liyigqiba nyhani le sayithi.
Le ndawo yakhiwe ngokupheleleyo ngee-pallets kunye namanye amaplanga aqaqambileyo, kunye ne-Lysavaila tin eyahlukileyo kuphahla oludala lwentsapho yam - ngokuqinisekileyo le tin ifana newayini entle, iba ngcono xa ineminyaka.
Inqugwala liyibona kakuhle ingca, kwaye yeyona ndawo intle kwizinto ezintle onokuthi zava kuyo nencwadi, okanye bhetele ngakumbi; yonwabela ipleyiti yetshizi neglasi (okanye ibhotile) yewayini, ngoxa ubukele ilanga elimangalisayo.
Ikhitshi Langaphandle: U- uye wenza izinto ezimbalwa ngexesha lakhe, kodwa eli khitshi
langaphandle liyinto endiyithandayo!
Siye sabonisa ngakumbi i-Lysavaila tin emangalisayo, eyenza le ndawo ibe 'yinto emangalisayo'.
Kukho inyama eyojiweyo enepleyiti eshushu negrili yokupheka isaqhwithi nesinki yokucoca emva kwe-.
Njengazo zonke iindawo ezintle zeNdlu Encinci, iveranda yethu iyibona kakuhle ingca.
Siye sanikezela ngezinto zokuzonwabisa ngepikiniki kuyo (ibhaskithi, ingubo, imiqamelo, iipleyiti zeplastiki neeglasi).
Linda de ubone indlela ebukeka ngayo indawo yethu ebusuku!
Ukudityaniswa kwezibane zam zasendle kunye nesibhakabhaka sasebusuku esichukumisayo, kwenza kube yindawo emangalisayo... eyona nto imangalisayo kukuba iindwendwe zam zokuqala ziza kuhlala (ii-VIP zam eziye zahlala izihlandlo eziyi-5) zadibana nazo!!!... ndivuyisana kakhulu noFern noRoaan!!! Yeyiphi indlela yokukhawulezisa indlu encinci! KWAYE bekukho ezinye iziphakamiso eziyi-7 ukususela ngo-! Uthando lusemoyeni e-Bayside...
IMarion Bay yidolophu entle engaselwandle, kwiYorke Peninsula entle. IMarion Bay isemnyango weInnes National Park. Ipaki yindawo entle yendalo egcwele ziilwandle ezintle zaseOstreliya, kwaye ilungele ukuqubha, ukusefa, ukuloba, ukuhamba emahlathini nokubuka izilwanyana zasendle - phantse sinokuqinisekisa ukuba uza kubona i- kangaroo kunye ne-emu kuhambo lwakho! Jonga kwiwebhusayithi yePaki ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.
IMarion Bay inamalwandle amabini aphambili; iWillyama iyazi nge-SS Willyama ship wreck, kunye nePenguin Point, ulwandle olukhulu olukhokelela kwiMarion Bay jetty, eyindawo entle yokuqubha ebusuku.
IMarion Bay Tavern yiyo yodwa ibhari esedolophini, kwaye inesidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kuquka i-pizzas yomlilo weplanga, kwaye inevenkile yeebhotile.
IMarion Bay General Store inePetroli, thatha ukutya nezinto ezifana nobisi nesonka.
I-Studio Surf ibonisa ubugcisa bukaJason baselunxwemeni, kwaye inekhefi ethengisa ikofu neekhekhe ezenziwe ekhaya.
Kukwakho nokutya kweMBC; ukuthengisa iimveliso zetyuwa zasekuhlaleni nokulungiselela izihlandlo ezikhethekileyo, kunye noLwandle lwaseInland; ivenkile yokutyela ukutya kwaselwandle ngaphandle kweWarooka.
Umbuki zindwendwe ngu- Tiffany
Ndihlala eMarion Bay, ibe ndikufowunela ukuba kukho nantoni na oyifunayo!